✔ Huawei G-520-0000,U8833,U8951, C8813(EMOTION UI),MYANMAR FONT✔ | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
✔ Huawei G-520-0000,U8833,U8951, C8813(EMOTION UI),MYANMAR FONT✔
Posted on December 9, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	✔ Huawei G520-0000,U8833,U8951,C8813(EMOTION UI) MYANMAR FONT✔ Unlock Code တောင်းရတဲ့ Huawei ဖုန်းတွေ( Emotion UI) တွေအတွက် Root မလုပ် ပဲ နဲ့ မြန်မာဖောင့်တွေ . ကီးဘုတ်တွေ ကို ထည့်သွင်းပေးသွားမှာပါ.ဒီကောင်လေးက ဘယ် Emotion UI မှာမဆို အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျ.Emotion UI ဆိုတာ ဖုန်းမှာသုံးထားတဲ့ System တမျိုးပဲလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်..Emotion UI ဟုတ်မဟုတ်ဘယ်လို ကြည့်မလဲဆိုရင် ဖုန်းရဲ့ Setting>About Phone> Emotion UI Version ဆိုတာပါ ပါတယ်..အဲဒါဆိုရင်တော့ ဟုတ်ပါတယ်.
အပေါ်က ပုံထဲမှာ ပါ..အဲဒါဆိုရင်တော့ Emotion UI ဖြစ်ပါတယ်.. ဆက်သွားရအောင်နော်
ဖုန်းကိုပါဝါဖွင့်ပါUSB Debugging ကို On ထားပေးပါ ထို့ နောက် ကွန်ပျူတာ တွင် ချိတ်ပါ Emotion UI Theme လေးကို ဒေါင်းလော့ဆွဲ ၍ ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် ဇစ်ဖြည်လိုတ်ပါ ဇစ်ဖြည်လိုတ်လျှင် အထဲတွင် RunMe.bat ဖိုင်လေးတခု တွေ့ ပါလိမ့်မယ်.အဲဒီ RunMe.bat ကို ဖွင့်လိုတ်ပါ ။သူ့ ဘာသာ သူ အလုပ်ဆက်လုပ်သွားပါမယ်.. ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ထားတာကို ဖြုတ်လို့ ရပါပြီထို့ နောက် ဖုန်းရဲ့ Setting>Language&Keyboard>ForzenKeyboard ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါForzenKeyboardPro ကိုလည်းအမှန်ခြစ်ပေးပါဖုန်းရဲ့ Home ကို ပြန်ထွက်ပါScreen ပေါ်တွင် Themes ဆိုတဲ့ဖိုဒါကို လိုတ်ရှာပါThemes ဖိုဒါကို တွေ့ ရင် အဲဒီအထဲကို ဝင်လိုတ်ပါ
အဲဒီမှာ ပုံ သုံးပုံနော်.. မျှားလေး တွေ လည်းပြထားပါတယ်. အဆင့်လိုတ် လေး လုပ်သွားပါ..Theme With Font ဆိုတဲ့အဆင့် ပြီးရင်တော့ .. ဖုန်းက ပါဝါ ပိတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်..ဖုန်းပါဝါ ပြန်တက်လာရင်တော့ မြန်မာဖောင့် ရသွားပီ ဖြစ် ပါတယ် ။
လိုအပ်​တဲ့ file ကို ​အောက်​မှာ​နှစ်​သက်​ရာ လင့်​ခ်​ တစ်​ခုမှ ​ဒေါင်းယူလိုက်​ပါ။
★ Download From one2up★ ★ Download From ZippyShare★ အဆင်​​ပြေ ပါ​စေ။
← ✔ Zawgyi Keyboard Installer for windows7(64-bit)✔	Z4ROOT APK v1.3.0 ( Android Roo Apk ) 7Mb →